Sebenzisa iGoogle Drayivu ukuvumelanisa iiFayile phakathi kweTablet yeGlass kunye nePC
Isisombululo esinye sokuvumelanisa iifayile phakathi kwethebhulethi yakho ye-Samsung Galaxy kunye nekhompyuter kukusebenzisa iGoogle Drayivu. Yenye inkonzo yasimahla enikezelwa nguGoogle, ukubonelela nge-Intanethi, okanye ilifu. Iifayile ezigcinwe kwiGoogle Drayivu ziyafumaneka kuzo zonke izixhobo- iikhompyuter, iitafile, iifowuni- ezinesoftware kaGoogle Drayivu efakiweyo. Iifayile zinokwabelwana ngazo ngokuthe ngqo kwi-Intanethi.
Ukuba usetyenziso lweGoogle Drayivu aluzange lufakwe kwiGalaxy Note yakho okanye kwiGalaxy Tab, unokufumana ikopi kwiVenkile yeGoogle Play. Faka usetyenziso kwithebhulethi yakho. Nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela inyathelo ekufuneka ulithathile.
Ukwenza iGoogle Drayivu ihambelanise iifayile phakathi kwekhompyuter kunye nethebhulethi yakho, ufuna ikopi ye Isoftware kaGoogle Drayivu (isimahla!) efakwe kwikhompyuter yakho, ngokunjalo.
Emva kokuba ufake iGoogle Drayivu kwikhompyuter yakho, uGoogle Drive ubonakalisa ukugcinwa okukhoyo kwi-Intanethi kwikhompyuter yakho, uphinda iifayile kunye neefolda njengoko kufuneka. Ezo fayile kunye neefolda ziyafumaneka kuyo nayiphi na ikhompyuter okanye isixhobo esiphathwayo esine-software kaGoogle Drayivu okanye usetyenziso olufakelweyo.
Emva kokuba yonke into imiselwe, ukwabelana ngeefayile kulula.
Kwikhompyuter, vula ifolda kaGoogle Drayivu. Uya kuyifumana kwifolda yeakhawunti yakho, kunye nezinye iifolda ezidumileyo. Ibizwa ngokuba yiGoogle Drayivu, kwaye unokufumana indlela emfutshane kwindawo yesaziso (kwiWindows) okanye ngaphezulu kwescreen (kwi-OS X).
Kwithebhulethi, vula iapp yeDrive, efumaneka kwiscreen Zonke iiNkqubo. Ukuba uyacelwa, yamkela imigaqo yenkonzo. Ekugqibeleni uya kubona uluhlu lodweliso lweefayile kunye neefolda kwiGoogle Drayivu yakho. Chukumisa i icon ukuvula ifolda okanye ujonge ifayile.
Ukugcina ulwazi kwiGoogle Drayivu, sebenzisa i icon yokwabelana efumaneka kwiiapps ezahlukeneyo. Umzekelo, jonga umfanekiso kwiGalari egcweleyo, chukumisa i icon yokwabelana, kwaye ukhethe i icon yeDrayivu. Gcwalisa u-Layisha kuLwazi lweDrive, emva koko ucofe iqhosha u-Kulungile ukubeka loo mfanekiso kuGoogle Drayivu.
Iifoto, umculo kunye neefayile ezigcinwe kwiGoogle Drayivu ziyafumaneka kwangoko kuzo zonke izixhobo ezabelana ngeGoogle Drayivu.
Ungafikelela kuGoogle Drayivu nakwesiphi na isixhobo esixhumeke kwi-Intanethi, njengekhompyuter kwilayibrari yasekuhlaleni. Tyelela Google Drayivu kwaye ungene kwiakhawunti yakho kaGoogle ukufikelela kwizinto zakho.
iziphumo ebezingalindelekanga zokuphefumla kwespiriva
yintoni igama eliqhelekileyo le-zoloft
iziphumo ebezingalindelekanga ze-nifedipine
isulfamethoxazole / trimethoprim ds
yeyiphi i-antibiotiki ye-uti
I-promethazine 25 mg yokuchongwa kwepilisi